Fivoriana Manohitra Ny Fankahalàna Hanosehana ny Fanavakavaham-Bolonkoditra Mihamanjaka ao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraAbdul Halik Azeez
Voadika ny 29 Avrily 2013 5:05 GMT
Miomana ny hivory ao an-drenivohitra Colombo ny andron'ny 28 avrily ny mpikatroka manohitra ny fankahalana. Niaina fanafihana maherisetra misingatsingana sy kabary fankahalàna vondron'olona vitsy an'isa ny firenena tao ho ao. Tonga roa herinandro monja taorian'ny fiaretan-tory amin-dabozia nataon'ireo olona nijoro teo ivelan'ny biraon'ny Bodu Bala Sena (na Herin'ny Tanjaky ny Bodista, antsoina hoe BBS) tao Colombo izay noravan'ny BBS sy ny polisin'ny Sri Lanka (jereo ny Tatitra Global Voices [mg]) ity fihetsiketsehana ity.
Ny fiareta-tory arahin-dabozia, izay nomanin'ny vondrona fantatra amin'ny anarana hoe Buddhists Questioning Bodu Bala Sena (Bodista mandà ny Bodu Bala Sena) no fihetsiketsehana voalohany ho fanoherana ny zavatra kianin'ny maro ho kabarim-pankahalàna ataon'ny BBS amin'ireo vondron'olona vitsy an'isa ao amin'ny firenena. Ny bilaogera Indrajit Samaraiva mametraka ny politikan'ny BBS ho mbola sarotra takatra an-tsaina tahaka ny ao amin'ny vondro-piaraha-monina Bodista Sinhala ihany. Ny Dr. Vinoth Ramachandra indray manombana fa misy paikady hanodinana ny sain'ny olona tsy hijerena ny olana mitranga ao amin'ny nosy no ataon'ny BBS.
Taorian'ny nanoherany ny diplaoma Halal, nifindra toerana tamin'ny fitsikerana ny fomba fiakanjo Islamika ho an'ny vehivavy ny BBS, hoy ny tatitra nataon'ny mpanao gazety efa za-draharaha sady bilaogera D.B.S Jeyaraj. Maro ny tranga-panafihana misingatsingana nanerana ny firenena noho ny kabarim-pankahalana ataon'ny BBS.
Na dia ny BBS aza no fikambanana nasionalista (mpitandro ny fiandrianam-pirenena) amin'ny elatra farany ankavanana be tabataba indrindra, ny firohotanam-mpankahalàna Islam sy vondron'olona vitsy an'isa tao Sri Lanka dia niandoha nialoha ny fisongadinan'ity vondrona ity tamin'ny gazety tamin'ny alalan'ny fanafihana ny toerana masina miozolomana tao Anuradhapura, narahin'ny fanafihana Moske lehibebe kokoa tao Dambulla.
Tsy afa-bela ihany koa ny fiangonana, ary tratran'ny fanafihana ihany koa ny tempoly Bodista izay tsy miombon-kevitra amin'ireo mahery fihetsika ireo. Ny fandraharahàna tantanin'ny miozolomana no lasibatra manokan'ireo vondrona mpankahala ireo; ny iray haingana indrindra izao dia tao Colombo, nahitana moanina lohalaharana tao amin'ireo vondron'olona nanafika. maromaro ihany koa ny hetraketraka nataon'ny BBS izay toa nahazo ny fanohanan'ny polisy, ny malaza indrindra tamin'izany dia ny nanafihana ny toeram-pamonoan'omby iray tao Colombonoho ny tsaho tsy nisy fanamarinana fa novonoina tsy mifanaraka amin'ny lalàna mihatra ao an-tanàna ny biby vonoina ao.
Vao faramparany tao izany no nisy ny famondronan-kery ireo mpanohitra ny kabarim-pankahalàna, indrindra tao amin'ny tontolon'ny tambajotra sosialin'i Sri Lanka. Miezaka ny manao izay hampalaza azy ny hetsika tahaka ny Buddhists Questioning Bodu Bala Sena (Bodista mandà ny Bodu Bala Sena), Love not Hate (Mitia fa tsy mankahala) ary ity fanangona-tsonia iray ity mba handabohana izany. Mbola mafanan'ny ady an-trano 30 taona ny fahatsapana ankapoben'ny olona ao Sri Lanka any amin'ny faritra sasany ka mora mampifandray ny fanavakavahana ara-poko amin'ny herisetra goavana mety hitranga.
Toa valin-kafatra tsara nisongadina ny hetsika Facebook mampiely ny “Mivondròna ho amin'ny Firaisana”. Nandray ity fanapaha-kevitra ity i Fazly Mowjood
Raha mbola tsy mitsahatra ny mampiely ny fankahalana eto amin'ity firenena ity ny vondrom-pankahalàna dia izahay Sri-Lankey no hanakana azy ary ny alahady no hanombohanay azy, hisy ny hetsika maro hafa hotontosaina mandra-PAHANGINAN'NY vondrona mpankahala.
Tsy maintsy niala vola avy any amin'ny poketrany ihany ny mpanolo-tena nanomana izany hetsi-panoherana izany tamin'ny fifidianana fitaovana hananganana ireto afisy ireto:
Ny Hetsiky ny alahady dia mikendry ny hanamelohana ny kabarim-pankahalàna amin'ny ankapobeny fa tsy mikendry vondron'olona iray manokana, zavatra iray lehibe manavaka azy tamin'ny fiareta-tory arahin-dabozia. Mamelombelona ny hetsiky ny fanoherana ny fankahalàna ihany koa ny fahazoana fanohanana avy amin'ny mpanao politika tahaka ny kapitenin'ny mpilalao cricket teo aloha Arjuna Ranatunga sy ilay mpiantsehatra lasa mpanao politika Ranjan Ramanayake.